Saraakiil ka tirsan Hay’adda Socdaalka oo tababbar ku soo qaatay dalka Ingiriiska | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Saraakiil ka tirsan Hay’adda Socdaalka oo tababbar ku soo qaatay dalka Ingiriiska
Saraakiil ka tirsan Hay’adda Socdaalka oo tababbar ku soo qaatay dalka Ingiriiska
Waxaa maanta dalka dib ugu soo laabtay sarakiil ka tirsan Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda oo tababbar aqoon kororsi ah ugu maqnaa dalka Ingariiska ( UK ).
Saraakiishan ayaa waxa ay soo barteen sida loo hubiyo dukumintiyada iyo hababka Socdaalka waxana ay aqoonta ay soo barteen uga faa’ideyn doonaan saraakiisha kale ee Hay’adda ka howlgasha ee aan fursadda u helin inay ka qeyb galaan aqoon kororsigaasi.
Tababbarkan ay sarakiisha ku tageen Yurub ayaa noqonaya tababarki saddexaad ee saraakiil ka tirsan Hay’adda Soccdaalka iyo Jinsiyadda u tagaan dalalka dunida ugu hormarsan, waxana tababarkan Ingariiska ( UK ) ka horeyay tababbaro kale oo lagu qabtay garoomada diyaaraha ee dalalka Norway iyo Denmark.
23-kii bishan ayay saraakiishan u amba baxeen dalka Ingiriiska, kuwaasi oo tababbar aqoon kororsi ah ku soo qaatay Garoomada diyaaradaha dalka Ingariiska, gaar ahaan Garoomada magaalooyinka London , Manchester iyo Birmingham.
Previous articleMadaxweynaha JFS oo warqadaha Aqoonsiga Danjirenimo ka guddoomay Safiirka Itoobiya ee Soomaaliya
Next articleWasiirka Warfaafinta oo tababar u furay qaar kamid ah Wariyeyaasha Muqdisho